16 “Ngikhulumé lezi zinto kini ukuze ningakhubeki.+ 2 Abantu bayonixosha esinagogeni.+ Eqinisweni, ihora liyeza lapho wonke umuntu onibulalayo eyocabanga ukuthi wenzé inkonzo engcwele kuNkulunkulu.+ 3 Kodwa lezi zinto bayozenza ngoba abangazi mina noma uBaba.+ 4 Noma kunjalo, ngikhulumé lezi zinto kini ukuze kuthi lapho ihora lazo lifika, nikhumbule ukuthi nganitshela zona.+ “Nokho, anginitshelanga lezi zinto ekuqaleni, ngoba benginani. 5 Kodwa manje ngiya kulowo ongithumileyo,+ kodwa nokho akekho noyedwa kini ongibuzayo athi, ‘Uyaphi na?’ 6 Kodwa ngoba ngikhulumé lezi zinto kini izinhliziyo zenu zigcwele usizi.+ 7 Noma kunjalo, nginitshela iqiniso, Ukuhamba kwami kuzozuzisa nina. Ngoba uma ngingahambi, umsizi+ akasoze eza kini; kodwa uma ngihamba, ngiyomthumela kini. 8 Lapho yena efika uyonikeza izwe ubufakazi obukholisayo ngokuphathelene nesono nangokuphathelene nokulunga nangokuphathelene nokwahlulela:+ 9 okokuqala, ngokuphathelene nesono,+ ngoba abanalo ukholo kimi;+ 10 kube ngokuphathelene nokulunga,+ ngoba ngiya kuBaba futhi ngeke nisangibona; 11 bese kuba ngokuphathelene nokwahlulela,+ ngoba umbusi waleli zwe wahlulelwe+ kakade. 12 “Nginezinto eziningi okusamelwe nginitshele zona, kodwa anikwazi ukuzithwala njengamanje.+ 13 Nokho, lapho efika lowo, umoya weqiniso,+ uyonihola kulo lonke iqiniso, ngoba ngeke akhulume okungokwakhe, kodwa uyokhuluma lokho akuzwayo, futhi uyomemezela kini izinto ezizayo.+ 14 Yena uyongikhazimulisa,+ ngoba uyokwamukela okungokwami akumemezele kini.+ 15 Zonke izinto uBaba anazo zingezami.+ Kungakho ngithé wamukela lokho okungokwami akumemezele kini. 16 Kuzoba yisikhashana ningabe nisangibona,+ kube yisikhashana ningibone.” 17 Ngakho-ke abanye kubafundi bakhe bathi omunye komunye: “Kusho ukuthini lokhu akushoyo kithi ukuthi, ‘Kuzoba yisikhashana nje ningabe nisangibona, kube yisikhashana ningibone,’ nokuthi, ‘ngoba ngiya kuBaba’?” 18 Bathi: “Kusho ukuthini lokhu akushoyo ukuthi, ‘isikhashana’? Asazi ukuthi ukhuluma ngani.” 19 UJesu wayazi+ ukuthi babefuna ukumbuza, ngakho wathi kubo: “Ingabe nibuzana nodwa ngalokhu, ngoba ngithé, Kuzoba yisikhashana ningabe nisangibona, ngaphinda futhi ngathi, kube yisikhashana ningibone? 20 Ngiqinisile impela ngithi kini, Nizokhala nibangalase, kodwa izwe lizojabula; nizoba lusizi,+ kodwa usizi lwenu luzophenduka injabulo.+ 21 Owesifazane, lapho ebeletha, uba nosizi, ngoba ihora lakhe selifikile;+ kodwa lapho esembelethile umntwana, akabe esalukhumbula usizi ngenxa yenjabulo yokuthi kuzelwe umuntu ezweni. 22 Ngakho-ke, nani manje ngempela nilusizi; kodwa ngizophinde nginibone futhi izinhliziyo zenu zizojabula,+ futhi injabulo yenu akekho oyoniphuca yona. 23 Ngalolo suku+ ngeke nhlobo ningibuze imibuzo. Ngiqinisile impela ngithi kini, Uma nicela noma yini+ kuBaba uyoninika yona egameni lami.+ 24 Kuze kube yilesi sikhathi samanje anikaceli ngisho nento eyodwa egameni lami. Celani niyokwamukela, ukuze injabulo yenu igcwale.+ 25 “Ngikhulumé lezi zinto kini ngeziqhathaniso.+ Liyeza ihora engingasayikukhuluma ngalo nani ngeziqhathaniso, kodwa ngiyonibikela ngokucacile ngoBaba. 26 Ngalolo suku niyocela egameni lami, futhi angisho ukuthi ngiyokwenza isicelo kuBaba ngokuphathelene nani. 27 Ngoba uBaba ngokwakhe uyanithanda, ngoba niye nangithanda+ futhi niye nakholwa ukuthi ngaphuma njengommeleli kaBaba.+ 28 Ngaphuma ngivela kuBaba futhi ngizé ezweni. Futhi, ngiyalishiya izwe ngiya kuBaba.”+ 29 Abafundi bakhe bathi: “Bheka! Manje ukhuluma ngokucacile, futhi awusakhulumi ngeziqhathaniso. 30 Manje siyazi ukuthi wazi zonke izinto+ futhi awudingi muntu ukuba akubuze.+ Ngalokhu siyakholwa ukuthi waphuma kuNkulunkulu.”+ 31 UJesu wabaphendula: “Ingabe manje seniyakholwa? 32 Bhekani! Ihora liyeza, impela selifikile, lapho nizohlakazwa khona, ngamunye aye endlini yakhe+ futhi nizongishiya ngedwa; kodwa nokho angingedwa, ngoba uBaba unami.+ 33 Ngiye ngasho lezi zinto kini ukuze nibe nokuthula+ ngami. Ezweni nilusizi, kodwa yimani isibindi! Mina ngilinqobile izwe.”+